Nagu saabsan - Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd.
Xaashida adag ee PP (dusha dhalaalaya)
PP xaashid adag (oogada sare)
Xaashida adag ee PP
Xaashida adag ee PP (dab -damiyaha)
Xaashida adag ee PP (UV xasilisay)
PPH xaashi adag
PVC usha wareegsan
PVC usheeda dhexe
Usha alxanka ee PVC
Usha alxanka PP
Usha alxanka HDPE
PVC-M beebka sahayda biyaha
Dabaqa UPVC iyo tuubada waraabka
UPVC tuubo koronto
Dhuumaha kiimikada ee UPVC
Tuubada biyaha ee UPVC
Tuubada biyaha ee HDPE
Biyo -mareenka HDPE iyo tuubada waraabka
HDPE double derbi jiingado jiingado
HDPE waxay xoojisay tuubada jiingada ee muquuninta leh suunka birta
Ku rakibida tuubooyinka PVC
Qalabyada tuubooyinka HDPE
Badeecadaheena waxaa si weyn loogu adeegsadaa gudaha kiimikada, injineernimada, elektiroonigga, cuntada, daaweynta, biyo -gelinta iyo mashaariicda dheecaanka, qalabka dhismaha, waraabka beeraha, roodhida badda, isgaarsiinta korontada iyo warshadaha kale.
Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. waa soo -saare hoggaamineed oo la aqoonsan yahay oo ku jira tikniyoolajiyadda wax -soo -saarka ee alaabada caagga ah ee waxqabadka sare leh ee Shiinaha. Waxaan bixinnaa xaashida PVC, xaashida PP, xaashida HDPE, usha PVC, biibiilaha PVC, tuubada HDPE, tuubbada PP, astaanta PP, usha alxanka ee PVC iyo usha alxanka PP ee codsiyada kala duwan.
Tan iyo markii la aasaasay 1997 Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. waxay abuurtay dhaqan wax -soo -saar joogto ah iyo horumarin adeeg, isla markiiba waxay isu beddeshay shirkad caan ka ah caalamka. Waxaan si joogto ah ugu soo bandhignay tas -hiilaad wax -soo -saar oo shisheeye ah ilaa iyo hadda waxaan haynaa 20 tas -hiilaad oo heer sare ah, 35 tas -hiilaad oo tuubooyin iyo alaabooyin kale oo caag ah. Shirkaddu waxay dabooshaa aag dhan 230000 mitir murabac, waxsoosaarka sanadlaha ahna wuxuu kor u dhaafayaa 80000 tan. Annagu waxaan nahay shirkadda keliya ee diyaarisay oo samaysay halbeeggii qaranka ee alaabta caagga ah.
Tayada badeecadaheena iyo adeegyadeena waxaa lagu cabiraa iyadoo lagu saleynayo heerarka iyo tilmaamaha qaranka iyo kuwa caalamiga ah. Marka laga reebo samaynta baadhitaanno dhammaystiran oo gudaha ah, waxaan helnay tiro shahaadooyin dibadeed ah, tusaale ahaan. waxaan si dhab ah u qaadannay Aqoonsiga Maareynta Tayada Caalamiga ah ee ISO9001 ee tayada. Sannadkii 2003-dii waxay heshay Shahaadada Ganacsiga Sare ee Teknolojiyadda, ka dibna waxay gudbisay shahaadada ka-dhaafitaanka badeecadda kormeerka ilaalinta tayada ee 2007. Waxaan helnay shahaadada nidaamka maaraynta deegaanka ISO14001 sannadkii 2008.
Waxaan samaynay shabakad iib oo adduunka oo dhan ah, oo ay taageerto macmiilka u janjeedha weligeed iyo hagaajinta joogtada ah ee badeecadaha iyo hababka. Illaa iyo hadda wax soo saarka ayaa loo dhoofiyay in ka badan 30 dal, sida Ameerika, Ingiriiska, Canada, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand iyo wixii la mid ah. Waxaan ku guuleysanay qiimeyn wanaagsan dhammaan macaamiisheena xaqa alaabta wax -qabadka sare leh, qiimaha mudnaanta leh iyo adeegga wax -qabadka oo dhan.
ADEEGGA IIBKA IIBKA
Baodayn Warshadaha Caaga Lida Co., LTD., Had iyo jeer qaado "adeegga 24-ka saacadood, adeegga horumarsan, adeegga habka oo dhan, adeegga nolosha oo dhan" oo ah ujeeddada adeeggayaga, iyo "waa in codso macaamils'dalabka, hel ah macaamiisha'kalsooni iyaga qanacsanaanta "sida fikraddayada adeegga, u hoggaansan tayada waxay ku dadaashaa badbaadada, wax -ku -oolnimada iyo horumarka, adeegga sumcadda. Anagadamaanad qaado alaabta tayo leh muddada dammaanadda gudaheeda, haddii ay alaabta leeyihiin dhibaato tayo leh, waan yeeli doonaa dayactirka, beddelka ama soo noqoshada dib shuruud la'aan.
Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. waxaa ka go'an inay siiso macaamiisheena wax soo saar tayo leh, iyo sidoo kale inay u fidiso adeegyo qiimo badan leh oo ay ka mid yihiin taageero farsamo iyo jawaab ku habboon baahida maalin kasta ee macaamiisheena. Waxaan kula shaqayneynaa maalin kasta si aanad u buuxin filashooyinkaaga ugu sarreeya, laakiin inaan kaa caawino inaad si joogto ah uga faa'iidaysato suuqa cusub Fadlan nala soo xiriir si aad wax dheeraad ah uga ogaato Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd.
Taleefan ： 0086-17731201156
Iimayl ： lidaplastic@ldsy.cn
Cinwaanka ： No.316 Pingan West Street, Shunping County, Baoding City, Hebei, China 072250